Nbudata Boeing 747-8i Air Force Otu ngwugwu FSX & P3D - Rikoooo
downloads 44 364
SkySpirit2011, Alrot, edere site na Enrique Cornejo, gbanwetụrụ & melite site na Rikoooo, Air Force One repaint site Dagobert
Emelitere na 01 / 08 / 2018: Ihe atụ 3D emelitere (SSPX2012-748V4_GENX.mdl 2012 -> 2016), ederede HD ọhụrụ maka ikuku Force One (nke Dagobert), ederede abalị ọhụrụ, FDE ọhụrụ (Aircraft.cfg na 747-8GEnx.air), gbakwunyere V-Speed nlele, agbakwunyere ala nlele Mbara ala, nwelite GPWS, nkwụsi ike na ịdị adị n'eziokwu. Prepar3D v4.3 dakọtara
Air Force One bụ oku na-aga ihe ịrịba ama nke ọ bụla ugbo elu nke Air Force nke United States na nke bụ President nke United States.
Ebe ọ bụ na 1990, president nsoro na-agụnye abụọ Boeing 747 n'ụzọ pụrụ iche na na refurbished nke mere na ndị president na otu ya nwere ike ịkpali flexibly na n'enweghị ma na kọntaktị na ndi nkiti na agha ndị ndú ime ka ọ dịghị ihe merenụ mbubreyo a nsogbu.
FSX Air Force One Boeing 747-8i nwere VC dị elu nke Alejandro Rojas Lucena na VC textures na-emeziwanye site Enrique Cornejo.
Nke a na-enye ndị B747 a payware virtual kokpiiti anya na now-acha akwụkwọ ndụ akpụkpọ anụ tapestry ndị dị n'akụkụ nke oche. Ọ ọbụna nwere a pilot jaket kwubara ndị nọ n'azụ nke kokpiiti. The panel.cfg na aircraft.cfg e kpọkọtara ọ na-edekwa site Flightsim Workshop Team.
Ugbu a, i nwere ike gbapụta "m oyiyi" window na mebere kokpiiti ka mfe iru-esonụ windo: GPS, avionics, map, ATC, ọrịrị / radio altimeter / nāpunara mgba ọkụ, auto-ezumike mgba ọkụ, trotul quadrant, elekere, descentometer, kneeboard na-efefe n'elu panel. A ọhụrụ mma na m akara ngosi window bụ pitot okpomọkụ mgba ọkụ na ma gbanyụọ atụmatụ (XML nlele site Enrique Cornejo).
The autopilot on switches nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọkụ nke na-ha anya ọzọ kwesịrị. Center ATC njirimara na a ugbo elu bụ "Boeing 747 Air Force One". Ọnọdụ nke strobe ọkụ e ofu. Kokpiiti echiche si pilot oche bụ ugbu a ihe ọma na n'ihi na anya ka oche bụ ogologo oge. The ụgbọelu nwere ọhụrụ engine echiche na ọhụrụ VC n'ime ime echiche. The brek nwere a esi brek usoro ime ka smoother ibe ya n'ala. The Air Force One udidi bụ ihe magburu onwe na Professional textures site amaghị, nke na-agụnye nkọwa, n'ezie anwụrụ ọkụ na anọ engines, ọzọ ụlọ echiche, ezi uche ụda na ndị ọzọ kwesịrị abalị VC ọkụ na fuselage abalị textures.
E mekwaala ka ihe ndị na-adịghị mma ahụ belata, yabụ ugbu a ntụgharị na-adịzi nwayọ. Aircraftgbọ elu a na-eji Project Open Sky FSX Boeing B747-800 ụdị OSX748V4_GENX (MDL), ma tinye mpio windky Posky Utility iji lelee akwa mgbago, ọrụ ụgbọ ala, wdg. A na-edegharị ụda injin dị ka ezigbo ndị nwere ammobi ampa. Igwe na-ahụ maka Njikwa Flight (FMC) bụ nke etinyere ma yie ngwaọrụ ịkwụ ụgwọ. VC gụnyere FMC, Ngosipụta Flight Primary (PFD) na Ngosipụta Ọtụtụ Ọrụ (MDF) gosipụtara na oke ziri ezi. Igwe a na-ahụ anya mebere ọkụ nwere usoro injin na-egosi na usoro Egosi Ejizi makwaara dịka EICAS, Igwe Ọdụdọ Nkwado Ala (GPWS), igwe na-arụ ọrụ, ọkụ ụlọ, mgbanyụ ọkụ, ịgbanyụ ọkụ, ịgbanye mmanụ ọkụ.
I nwekwara ike ịchọta ọkụ ngbanwe ọkụ, ọkụ taxi ọkụ, jenjin injin, APU na-enye ọkụ, mgbanye batrị, igwe mbido, mgbanwe ọkụ-ikuku, ọkụ na-agbanye. Nọmba elekere dị ugbu a na oroma nke na-eme ka ha dị mma karịa ma dị mfe ịmata. Kpakọtara ma dezie maka FSX nke Onye nchoputa ihe omumu ihe omuma nke ndi Enugwuque Enrique Cornejo kwuru.
Onye edemede: SkySpirit2011, Alrot, nke Enrique Cornejo deziri, nke Rikoooo, Retoo Air Force One rụziri ya site na Dagobert